Ukuphawula kukaGu ngokushintsha kweMedia landscape | Martech Zone
NgoMsombuluko, Agasti 28, 2006 NgoLwesibili, Okthoba 4, 2011 Douglas Karr
URuth Holladay's blog namuhla ukhomba i esihlokweni engxoxweni no-Al Gore futhi ubuza imibono yakhe kwabezindaba. Ngokuqondile, umuntu obuza imibuzo u-Gore ngokugxilwa kwabezindaba, kungaba yizinkampani noma ngohulumeni (emhlabeni jikelele). Gore uthi:
Intando yeningi iyingxoxo, futhi indima ebaluleke kakhulu yabezindaba ukwenza leyo ngxoxo yenkululeko ibe lula. Manje ingxoxo ilawulwa kakhulu, isendaweni eyodwa. - Al Gore
Hewu. Ukungabi ngumlandeli kaGore, ngiyamangala impela futhi ngijabule ngobuqotho ngomyalezo wakhe lapha. Empeleni ngingomunye walabo bafana abakholelwa ngokweqiniso ukuthi abezindaba enza zama ukuthonya isimo sethu sezombusazwe.
Ungangizwa kabi… Angicabangi ukuthi abezindaba bayinqwaba yamantongomane angakwesobunxele ocingweni oluyimfihlo oluzama ukuxosha amaRephabliki, ngicabanga nje ukuthi abantu abaningi kwezokuxhumana nakwezokuzijabulisa banezimpilo ezihluke kakhulu kunathi sonke. Ngenxa yalokho, umbono wabo ngomhlaba uthambekele ekubeni wehlukile. Ngaphezu kwalokho, iqiniso lokuthi bafundiswe kahle futhi basesikhundleni sokuphatha ngokungagunci, bane-pulpit yokuhlukumeza yokuhambisa imibono yabantu.
Ukubhloga kanye ne-Intanethi kuyayishintsha leyondawo. Ngemuva kokubhalisela amaphephandaba ama-2 isikhathi esingaphezu kweminyaka eyishumi, ngokweqiniso angisawuthathi. Ngifunde zonke izindaba zami ku-intanethi, futhi ngafunda ukuphendula kwe-blogosphere ezindabeni. Kaningi kunalokho, ngiyaqala ukubona izindaba eziningi ezithathwa ama-blogger kunamaphephandaba. Ngicabanga ukuthi esinye sezizathu ukuthi ukubhuloga kuqeda 'ukuhlunga' komyalezo.
KaRuth blog yisibonelo esihle salokhu. URuth ukhululiwe ezibophweni zomhleli futhi ibhulogi lakhe lishaya laya phambili endaweni yokubloga yase-Indiana. Ngiyayithanda. Ngemuva kokufunda izindatshana zikaRuth iminyaka, angibonanga uthando nentshiseko emlayezweni wakhe waze wathatha umhlalaphansi waqala ukubhuloga. URuth ufana nenkunzi ephunyuke esitolo se-china! Ngingahle ngingavumelani nomyalezo wakhe kwesinye isikhathi, kepha angikwazi ukulinda ukufunda okuthunyelwe kwakhe okulandelayo.
Ithemba lami ukuthi i-Intanethi izoqhubeka nokuba yindlela entsha “yokwenza leyo ngxoxo yenkululeko”. Ngiyethemba ukuthi ihlinzeka nge-megaphone kulabo abangakhulumi izwi emhlabeni wethu futhi lapha emphakathini wethu. Amagama ekhasini anamandla ngokweqiniso… ikakhulukazi uma engalawulwa.
Inkulumo emide ephilayo!